စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ အချက် ၅ ချက် | PRO-X Software Solution
Dashboard | မြန်မာ
+95 9778915075 | [email protected]
စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ အချက် ၅ ချက်
သင့်ရဲ့ ကုမ္ပဏီမှာ ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကနေ အိုင်တီပိုင်းအထိ ဌာနတိုင်းက အရေးပါပါ တယ်။ ဒါကြောင့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ အောင်မြင်မှုအတွက် ဌာနတိုင်းအဖွဲ့တိုင်းရဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေက အဓိက အခန်းကဏ္ဍက ပါဝင်နေပါတယ်။ အားနည်းချက်လေး တစ်ခုဆိုရင်တောင် ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုရဲ့ အကျိုးစီးပွား၊ စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားတွေကို အလွယ်တကူထိခိုက်မှုရှိ လာစေ နိုင်ပါတယ်။ သင်ဟာ သေးငယ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်ငန်းကြီးတွေကို ဦးဆောင်နေသူပဲဖြစ်ဖြစ် ဝန်ထမ်းတွေရွေးချယ်ခန့်အပ်ရာမှာ အမြဲတမ်းမှန်ကန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချမှတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အလုပ်လျှောက်လွှာမှာ ဒီအချက် ၅ ချက်ကို ကြည့်ပြီး မကောင်းတာတွေကို ရှောင်ကြဉ် နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့ လည်ပတ်မှုမှာ အခက်အခဲတွေက အမြဲတမ်းရှိစမြဲပါ။ သစ္စာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေက ခက်ခဲတဲ့ တာဝန်တွေကို ပိုပြီးအလွယ်တကူဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ အဆင် ပြေတဲ့ အချိန်မှာနေပြီး ခက်ခဲတဲ့အချိန်ထွက်ခွာသွားမယ့်သူမျိုးတွေကို လိုချင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ အင်တာဗျူး မတိုင်ခင်နဲ့ အင်တာဗျူးတဲ့အချိန်အတွင်း အခက်အခဲတွေကို ရင်ဆိုင်မယ့်သူလား ထွက်ပြေးမယ့်သူလားဆို သင့်အနေနဲ့ လေ့လာဆန်းစစ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဥပမာ အလုပ်အကိုင်မျှော်မှန်းချက် နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကို ဦးဆောင်နေသူ တစ်ယောက်အနေနဲ့ သင့်ရဲ့ အတွေးအမြင်တွေကို ကုမ္ပဏီနေရာဌာနအသီးသီးကို အလျှင်အမြန် ဖြန့်ဝေနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ မန်နေဂျာမျိုးကို သင်လိုချင်မှာ ပါ။မန်နေဂျာတစ်ယောက်ဟာ သင့်ရဲ့ အမြင်တွေကို မမျှဝေဘဲ အတ္တဆန်မှု ဒါမှမဟုတ် အတွေးအမြင်တွေရောထွေးစေမှုဖြစ်စေတယ်ဆို အဲဒီလိုမန်နေဂျာမျိုးက ရှိမနေသင့်ပါဘူး။ အဲဒီလိုမန် နေဂျာတွေဟာ လုပ်ငန်းအစဉ်အလာ တစ်ခုလုံးကို ဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ လက် ထောက်ညွှန်ကြားသူက လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်တဲ့ အတွေးအမြင်တွေကို ဖန်တီးဖို့က သင့်ရဲ့ တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။
လုပ်နိုင်သမျှ အကောင်းဆုံးလုပ်ပါမယ့်လို့ ကတိပြုတဲ့ ဝန်ထမ်းမျိုးကို ရှာဖွေပါ။ အရင်လုပ်ခဲ့တဲ့ အလုပ်အကြောင်းမေးတဲ့အခါ ကိုယ်တာဝန်ယူခဲ့ရတာတွေကို ရွတ်ပြနေသူမျိုးထက် ကိုယ့်ရဲ့ အလုပ်တာဝန်အပေါ် စိတ်ဝင်စားမှု၊ပြီးမြောက်မှုတွေအကြောင်း စိတ်အားထက်သန်စွာ ပြောတတ်တဲ့သူမျိုးကို ပိုပြီးရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။
မန်နေဂျာတစ်ယောက်ဟာ လူမှုဆက်ဆံရေး ကျင်လည်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒါမှသာ သူတို့ရဲ့ ညွှန်ကြားချက်တွေကို ဝန်ထမ်းတွေက ရှင်းရှင်းလင်းလင်း နားလည်သဘောပေါက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ဝန်ထမ်းတွေကို တန်ဖိုးထားဆက်ဆံမှုရှိဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ မောက်မာတတ်တဲ့သူတွေဟာ ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အတွက် မထားရှိသင့်ပါဘူး။
ဦးဆောင်မှုကောင်းတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ ပန်းတိုင်က အကောင်းဆုံးလုပ်ငန်းတစ်ခုကို တည် ဆောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို အဖွဲ့အစည်းမျိုးအတွက် အသင်းအဖွဲ့စွမ်းရည်မရှိတဲ့ မန်နေဂျာမျိုးတွေ လိုအပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ လိုက်လျောညီထွေမှုရှိမှုနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်မှုတွေဟာ အဖွဲ့အစည်းတိုင်းအတွက် အရေးပါတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဝန်ထမ်းတွေ အနေနဲ့ လုပ်ကိုင်ရမယ့် လမ်းစဉ်နဲ့ အစီအစဉ်တွေကို သိရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းရှင် ဒါမှမဟုတ် အမှုဆောင်အရာရှိ တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကို မရွေးချယ်ခင် အထက်ပါ အချက်အလက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိမရှိကို လေ့လာသင့်သလို ကိုက်ညီမှုမရှိတဲ့ မန်နေဂျာတွေကိုလည်း အလုပ်က ရပ်နားသင့်ပါတယ်။
Ref: The5traits of highly effective leaders
Credit: Myanmar B2B Management Magazine
Visits : 2809
၃၅ နှစ်အထိ ဆင်းရဲနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ မင်းရဲ့အမှားပါ
MARKETING THEORIES – PESTEL ANALYSIS
အောင်မြင်သူများ နေ့စဉ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတိပေးလေ့ရှိသည့် အချက် ၇ ချက်
No-444(A), 4-Fl, Banyar Dala Street, Tamwe Township, Yangon, Myanmar.
သင့်လုပ်ငန်းအတွက် ဘာလို့ Website ဆိုတာလိုအပ်တာလဲ
PRO POS တွင် Time zone ကိုပြင်ဆင်နိုင်ခြင်း ⌚
Real Estate Management System ဆိုတာ အိမ်ခြံမြေ ကုမ္ပဏီများ နှင့် အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်နေသူများ အသုံးပြုရန်အတွက် လိုအပ်သော ဆော့ဝဲလ် တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါသည်။
© 2021 PRO-X Software Solution. All Rights Reserved.